Iimveliso ezishushu zeAlibaba eziShushu zoThengiso lwePolyester kubenzi bomqamelo | Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezoRhwebo, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Iimveliso eziphambili zeAlibaba eziShushu zeMveliso eziThengiswayo ngePolyester yokuThengisa abavelisi
Umgangatho kaRayson uqinisekisiwe. Inkqubo yokuvelisa ijolise kukhuseleko lomthengi ngokuqinisekisa ukuthotyelwa kwemigangatho yokhuseleko ngexesha lokulungiswa.
Abathengi abafuna ukwazi ngakumbi ngemveliso yethu entsha
okanye inkampani yethu, qhagamshelana nathi nje. Ngaphezu koko, ukuhanjiswa kwethu ngexesha elifanelekileyo kwaye kunokuhlangabezana neemfuno zabo bonke abathengi. Emva kweminyaka yophuhliso, siye saseka ubudlelwane intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi bethu kulo lonke ihlabathi. Nceda uqiniseke ukuba sinelungelo lokuthumela ngaphandle iimveliso zethu kwaye ngekhe kubekho monakalo wenzekileyo kwimpahla ehanjisiweyo. Siyakwamkela ngokunyanisekileyo umbuzo wakho kunye nomnxeba. Uhlala ixesha elingakanani umatrasi wakho? Yonke imatrasi yahlukile. Ukuba uphosa ebusuku okanye uvuke ngentlungu lixesha lokuba ufumane umatrasi omtsha nokuba ungakanani na. Sincoma ukuba ujonge i-tag yomthetho kwaye utshintshe ubuncinci yonke iminyaka esibhozo. Ungacela inkampani yokubonisa ukuba ithathe isampuli kwinkampani yethu okanye ungasithumela i-DHL, i-FedEx okanye i-UPS yokuqokelela inombolo yeakhawunti, singathumela isampulu kuwe ngeakhawunti yakho.Ndingayindwendwela imveliso yakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufuphi nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukukusa.